Deg Deg: Nin tahriibe ah oo xaqiijay dhimashada Somali la fuushanayd - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Deg Deg: Nin tahriibe ah oo xaqiijay dhimashada Somali la fuushanayd
Maxamed Aadan Oga oo Itoobiyaan Oroma ah kana mid ahaa tahriibeyaal Somali ku jirto iyo weliba haweenay uurleh ayaa laga soo badbaadiyay keligii doontaas. Maxamed oo waraysi bixiyay ayaa sheegay inay Ka soo raaceen doonta magaalo xeebeedka Saawiya ee Liibiya.
“Waxaan ahayn 15 oo ah nin iyo naagtiis oo uurleh oo Ka soo jeeda Gaana, Laba Itoobiyaana iyo 11 Soomaali ah ayuu yiri Maxamed.
Waxa naga dhamaadey shidaalkii, waxa ku xigtey cuntadii, waxana u dambeysay biyihii kadibna waxaan bilowney inaan cabno biyaha hadda ayuu raaciyay.
Waxa na dhaafaya doomo, helikobtaro wax noo istaaga ayaan waynay kadib waxa bilowdey dhimashada labadii qof ee ugu horeeyay.
Maxamed oo markii uu Liibiya tagey ay is barteen nin Somali ah ayaa si qiiro leh uga hadley dhimashada dadkii ay wada socdeen. “Waa kuleyl waana cadceed kolba qofkii dhinta badaan ku tuurnaa ayuu yiri isagoo ilmo ku joogto indhihiisa.
Maxamed wuxuu Ka hadley sida aakhirkii ay isaga iyo hal wiil ay ku soo hareen doonta caaga ahayd uuna wiilku ku yiri maxaa inoo yaala aan badda isku tuurno ana aan ku iri ” adu hadaad is dileyso is dil aniguse isma dilayo.
Waxa ugu dambeyn keligii soo badbaadiyay helikobtar ay leeyihiin dalka jasiirada Malta kadib markii uu badda ku jirey 11 maalmood.
Rabi ayaa ii soo direy helikobtartaa ayuu yiri Maxamed Aadan qiiro hadley. Kumanaan ay Somali ku jirto ayaa naftooda ku haligey badda u dhaxaysa Carabta iyo Yurub.
Doontan lagu hoobtey ayaa Isniintii dhaweyd ka baxdey Liibiya.
Sawirka hoose waa doontii tahriibeyaashu ku dhinteen oo hal meyd ku jiro